Funny ဆိုပြီးတော့ desktop ပေါ်မှာ ပေါ်နေတဲ့ virus - MYSTERY ZILLION
Funny ဆိုပြီးတော့ desktop ပေါ်မှာ ပေါ်နေတဲ့ virus
June 2009 edited March 2010 in Antivirus & Virus
Funny ဆိုပြီးတော့ desktop ပေါ်မှာ ပေါ်နေတဲ့ virus ကို ရှင်းဖို့ နည်းလမ်းလေးများရှိရင် ပေးကြပါအုံး :14:
ကျွန်တော် သတိထားမိသလောက်တော့ အဲဒီ virus ဝင်ပြီဆိုရင် အဲဒီဝင်တဲ့ စက်မှာ စိုက်လိုက်တဲ့ stick ထဲမှာ update.exe ဆိုပြီးတော့ 4.7 MB လောက်ရှိတဲ့ file တခုပါလာတာ ရှိတယ် ပြီးတော့ စက် ထဲမှာရှိသမျှ folder တွေကို hidden ဖြစ်သွားပြီး same name နဲ့ dll icon နဲ့exe ဖိုင်တွေ ကနေရာ ဝင်ယူထားတာတွေ့ရပါတယ် ပြီးတော့ စက်ကိုဒီတိုင်းသုံးနေရင်းက သူက Ohm Mar Soe ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးပုံ နဲ့ သူ့ရဲ့ မွေးနေ့ကိုမှန်အောင် ဖြေခိုင်းပါတယ် မှန်ရင် virus က သူ့အလိုလို ပျောက်သွားမယ်လို့ ပြောပါတယ် ကျွန်တော်လဲ ရန်းဖြေလိုက်တာ မှားသွားပြီးစက်က ဘာမှ လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး restart ချလိုက်တော့ ပြန်မတက်တော့ပါဘူး system32 ထဲက dll ဖိုင်ကို virus ကဖျတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်
ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော်ဆိုင်က စက်6လုံး ထိသွားပါတယ် (:((:((:((:((:((
အကယ်၍ ဒီဗိုင်းရပ် ကိုသတ်ဖို့နည်းလေးများရှိရင် ပြောပြကြပါအုံး ခုတော့ format ရိုက်ပြီး window ပဲပြန်တင်နေရတော့ အဆင်မပြေဘူးပေါ့ ကျေးဇူးပါပဲ
soulkiller19 wrote: »
သူက Ohm Mar Soe ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးပုံ နဲ့ သူ့ရဲ့ မွေးနေ့ကိုမှန်အောင် ဖြေခိုင်းပါတယ် မှန်ရင် virus က သူ့အလိုလို ပျောက်သွားမယ်လို့ ပြောပါတယ် ..
ပြည်တွင်းဖြစ်ကြီးပါလား ဥမာစိုး နဲ့ပက်သက် သမျှလိုက်စုံစမ်းရမယ်ထင်တယ်....:D:D:D unlocker လို software မျိုးနဲ့ ဖျက်ကြည့်ပါလားခင်ဗျာ... အကြံပေးကြည့်တာပါ မှားရင်တော့ခွင့်လွှတ် :D:D
ဥမ္မ္မ္မာစိုးရေ နင်ဘယ်နေ ့မွေးတာလဲ :D:D virus ရေးတဲ့ကောင်ကလည်း virus ကို 4.7 MB တောင်ရေးတယ်ဆိုတော့ဘာ coding တွေထဲ့ရေးလို ့လည်းမသိဘူး ကြည့်ရတာပိန်းတိန်းတိန်းနဲ :39::39::39:့ပြန်မတက်တော့ဘူးဆိုတော့ system file ကိုဖျက်လိုက်တာထင်တယ် Live Cd နဲ ့ဖြစ်ဖြစ် repair လုပ်ကြည့်ပါလား
အလွယ်ကူဆုံးဆိုရင် အဲ့ဒီဥမ္မာစိုးဆိုတဲ့ကောင်မလေးပုံကို တင်ပေးလေဗျာ။
MZ Member တွေရဲ့ အသိထဲကဆိုရင် ဘယ်နေ့မွေးလဲ မေးပေးလို့ရတာပေါ့။
ဥမ်မာစိုးဆိုတော့.......တစ်ယောက်ယောက်တော့လက်ဆော့ပြီထင်တယ်..နာလည်းသတိထားဦးမှ...ဟင့်..နာ့စက်လေး ဖောမတ်ကျွေးထားတာမှ မကြာသေးဘူး.... တော်တော်အားကြတဲ့ဟာတွေ...ရေးပါလား.. Os တွေ... ဘာမဟုတ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ရေးပြီး ဖိုင်ဖျက်တာလောက်လေးကို ဟုတ်လှပြီထင်နေကြတဲ့ဟာတွေ.....
ကျနော် ERD Commander လေးတင်ပေးမယ် system file repair function လေးနဲ့စမ်းကြည့်ပါ
ERD commander က password recovery တစ် ခု ထဲမဟုတ်ပါဘူ။file recovery function တွေလဲပါပါတယ်။
http://ifile.it/x9n21agremoval tools link လေး ပါ။ run ပြီးရင် process ကိုအရင် kill ပါ။ (သတိrun box ထဲမှ explorer.exe msconfig.exe cmd.exe regedit.exe gpedit.exeလုံး၀မခေါ်ပါနဲ ့)။ registry path တွေကိုကျနော်ရှာပြီးတင်ပေးပါမယ်။
အဲဒီ၂ခုက registry repair နဲ့folder options တွက်ပါ။
http://ifile.it/h1dsezr ဒါလေး download လုပ်ပြီး start up ထဲက msi.exe လား update.exe လား remove လုပ်လိုက်အုံးနော်
ဖုန်းနံပါတ်က သရက်မြိုဗျ .. ဒါ သရက်မြို့ဟက်ကင်းဒေးရေးတဲ့လူလားမသိဘူး ..ဖြစ်နိုင်ဖို့ရှိတယ်
June 2009 edited June 2009 Registered Users, Moderators
ကျွန်တော်လဲ အဲဒီဗိုင်းရပ်စ်ကို သတ်ဖူးတယ်ဗျ။ အဲဒီဗိုင်းရပ်စ်က
C:\_Documents and Settings\_username\_Application Data\_msi အဲဒီဖိုလ်ဒါထဲမှာ(msi ဘာဆိုလားပဲ) msi.exe ရယ် update.exe ရယ်ရှိတယ်ဗျ။ အဲဒီမှာပဲလားဆိုရင်မဟုတ်ဘူးဗျ။ သူက အဲဒီနေရာအားလုံးမှာရှိတယ်။ နားလည်အောင်ထပ်ပြောရရင်
C:\_Documents and Settings\_All Users\_Application Data\_msi ဆိုတာမှာလဲ ထိုနည်း၄င်းပဲရှိတယ်ဗျ။ ပိုပြီးသေသေချာချာသိချင်ရင်တော့ search နဲ့ရှာကြည့်ပေါ့။ ရှာတဲ့နေရာမှာလဲ ရှာတာကို hidden ပါပေါ်အောင်ရှာခိုင်းပါ။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ search လဲခေါ်လို့မရလောက်ဘူးထင်တယ်ဗျ။ ရမယ်ဆိုရှာကြည့်ပေါ့။ မရဘူးဆိုရင်တော့
အဲဒီ ဆော့ဝဲလ်နှစ်ခုအကူအညီနဲ့ဖော်ပြီရှာကြည့်ပေါ့။ နောက်ဆုံး desktop ပေါ်က funny ဆိုတဲ့ ဖိုင်ကိုဖျက်ဖို့အတွက်တော့ မသေချာဘူးဗျ။ ကျွန်တော်တုန်းကတော့ရသွားတယ်။ နောက်စက်တစ်လုံးမှာသတ်ကြည့်တော့မရဘူး။ ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ registry ထဲမှာ funny ဆိုပြီးရှာတယ်ဗျာ တွေ့တော့ ဖိုလ်ဒါလိုက်ကြီးဖျက်လိုက်တယ်။ အဲလိုလုပ်လိုက်တာ delete လုပ်လို့ရသွားတယ်။ အဲဒါမလုပ်ခင်တုန်းက delete လုပ်ဖို့တောင်မပေါ်ဘူးမဟုတ်လားဗျ။
အဲဒီဗိုင်းရပ်စ်သတ်ရတာတော်တော်တော့လက်ပေါက်ကပ်တယ်ဗျ။ ဪ မေ့လို့ အပေါ်ကအဆင့်တွေမှာ update.exe နဲ့ msi.exe ကိုမသတ်ခင် taskmanager မှာ end process အရင်လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။ အဲဒါလုပ်ထားမှ ဖျက်လို့ရမှာဗျ။ ကျွန်တော်လဲရေးတတ်သလောက်ရေးလိုက်တယ်ဗျာ။ နားလည်လားတော့မသိ
ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေပေးလို့ ကျေးဇူး ကိုည
task manager မှာလဲ end process မရပါ....how can i go on ...ကိုညရေ
system restore တော့ရတယ်....မရတဲ့စက်တွေကိုတော့.....safe mode ကနေ system restore လုပ်တယ်...နောက်မရတာတွေကြတော့....format ပေါ့....တကယ်ဘယ်လို kill လဲသိချင်နေပါသေးသည်..
အစ်ကိုရေ ကျွန်တော်ပြောဖို့မေ့ခဲ့တာပါ။ safe mode နဲ့ဝင်သတ်ပါအစ်ကို...အဲဒါဆိုရင် end process လုပ်လို့ရပါလိမ့်မယ်။
sunami virus အမျိုးပဲထင်ပ.....ဟုတ်မလားတော့မသိဘူး
အဲ ့funny က ကျွန်တော ့စက်ထဲ က (D) အောက်ကဖိုင်တွေအားလုံ းလုံးကို .dll ဖိုင်နဲ ့application ဖိုင်တွေလုပ်ခံလိုက်ရတယ် ဖိုင်တွေကိုဘယ်လိုပြန်ဆယ်ရမလဲ ပြောပြပါလား ဗျာ ..:77:
ကျွန်တော် ့ဒေတာတွေ အများကြီးပါသွားတယ် ကူညီပါအုံး အစ်ကိုတို ့ရာ....
ကို SergeyBein ရေ kaspersky ကိုတင် update ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး hardisk တစ်ခုလုပ်ကို scan စစ်ကြည့်ပါလားဗျ။
ကိုရသာရေ ... uplocker နဲ့ တွယ်တယ်ဗျာ မရဘူး ဒီတိုင်းကြီးပဲ
arc software နဲ ့registryပြန်ရှင်းပြီး.....data recovery နဲ ့ဆိုရင်ကော....ပြန်ရနိုင်မလား...စမ်းကြည့်ပါအုန်း...ကျွန်တော်တုန်းကတော့...data တွေမပျောက်ပါ....ရက်ကြာကြာ virus ၀င် သွားလို ့လားဗျာ..
Funny ၀င်ပြီဆိုရင် Safe Mode ကနေလဲ ၀င်သတ်လို့ မရတော့ပါဘူး... Safe Mode မှာပါ Funny က Active ဖြစ်ပါတယ်....
အလွယ်ဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံးနည်းကို ပြောပြပါ့မယ်....
Funny က msiexec ဆိုတဲ့ Folder အဖြစ် စက်ထဲမှာ နေရာယူပါတယ်... Folder ထဲမှာတော့ msi.exe + update.exe ဖိုင် နှစ်ဖိုင် ရှိပါတယ်...
အဲ့ဒီ့နှစ်နေရာမှာ အရင်ဆုံး နေရာယူပါတယ်...
ပြီးတော့ Autorun.inf ဖိုင်နဲ့လဲ ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်... Autorun.inf က update.exe ကို ထောက်ပံ့တာပါ...
kill.exe ဖိုင်တစ်ဖိုင်က c:\_Windows\_system32\_DirectX ထဲမှာ ရှိပြန်ပါတယ်....
ကဲ... နေရာတွေ လဲသိပြီ....
Boot CD တစ်ချပ်နဲ့ Boot တက်ပါ... Search >> msiexec ကိုရှာ Folder ကို Del လုပ်..
kill.exe ကို Del လုပ်..
autorun.inf ကို Del..လုပ်
မျိုးပြုတ်ပေါ့ funny ရေ....
တစ်ခုတော့ သတိပေးချင်ပါတယ်.. Funny ၀င်တာ ကြာနေတဲ့စက်... မိန်းကလေးပုံပေါ်ပြီးတဲ့ စက်တွေအတွက်တော့ Dll ဖိုင်တွေ ပျက်သွားပါပြီ... Dll icon ပုံစံနဲ့ စက်ထဲမှာ exe ဖိုင်တွေ ပွားပါတယ်... C:\_ အောက်မှာ ရှိသော Folder တွေ အကုန်လုံးကို Hidden လုပ်ပစ်ပါတယ်..
ကဲ သိနေပြီဆိုတော့ Boot CD ရဲ့ အသုံး၀င်ပုံကို လက်တွေ အသုံးချကြတာပေါ့ဗျာ....
Desktop ပေါ်က Funny Folder အတွက်တော့
ကို နှိပ်.. Funny ကိုရွေး... ပြီးရင်...Unuse Desktop ဖိုဒါကို Del လုပ်လိုက်...
Funny အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ နေရာယူမှု ပိုမို များပြားလာပါတယ်....
ကြောက်ဖူးဟေ့တို့က မြေခွေးလေးမွေးထားတယ် ဟိဟိ
သိလို့ရေးတာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတဲ့ forum တွေထဲကကောင်းတာတွေလုပ်ထားတာပါ
ဒီလိုလိုက်သုံးလို့ virus မ၀င်ဘူးဆိုရင် ကျေနပ်ပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်၀င်ပြီးမှတော့ format သာကျွေးပေတော့
သူတို့က ဘာ registry တွေဖျက်သွားလည်းအကုန်မှမသိနိုင်တာ
my computer ကိုဖွင့် tools အောက်က folder options ကိုဖွင့် view ထဲက show hidden file ရယ် hide protected operating system files ကိုအမှတ်ခြစ်ထား
ဒါမှ virus file လား ကိုယ့်ဖိုင်လားခွဲခြားသိရမှာ မြင်ရမှာ
cpe17 anti autorun လေးလည်းဖွင့်ထား
ဘယ်တော့မှ my computer ကနေ stick media တွေမဖွင့်နဲ့
run box ကနေ drive name (c:,d:,e:,f:,g:) နဲ့ဖွင့်
ဖွင့်ပြီးသွားရင် icon လေးတွေသတိထားတော့ပေါ့ ကိုယ့်ထည့်ထားတဲ့ ဖိုင်ဖိုဒါ နဲ့မတူရင်
ဒါမှမဟုတ်မသင်္ကာရင် right click ခေါက်ကြည့် explorer မပေါ်ရင် သတိသာထားပါ။
အဲဒီဖိုင်တွေကလွဲလို့ကျန်တာတွေကို copy ကူးရုံနဲ့တော့မ၀င်ပါ။ မသင်္ကာတဲ့ဖိုင်တွေကို shift delete ကျွေးလို့လည်းရပါတယ်။
attrib +a +s +h +r autorun.inf(enter)
လေးကြိုတင်ဆောက်ထားလိုက်ပါတော်ရုံဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ autorun.inf ဖိုင်တွေ၀င်ရေးလို့မရတော့ဘူးပေါ့ အဲဒီဖိုင်ကို delete လုပ်လို့မရပါ ပြန်ဖျက်ချင်ရင်တော့
md နေရာမှာ rd ပြောင်းရိုက်လိုက်ပါ။:D
ဟုတ်ပါတယ်။ Desktop, Mycompter ထဲက Funny (Folder)ကို ဖျက်ချင်ရင်တော့။ Register Editor ထဲ က
chitmoe wrote: »
ဟုတ်ပါတယ်။ Desktop, Mycompter ထဲက Funny (Folder)ကို ဖျက်ချင်ရင်တော့။ Register Editor ထဲ က ဖျက်လိုက်ပါ။
Thanks ပါ။ အဲဒီ Funny folder ကကြီးကို မျက်စိရှုပ် နေတာကြာပါပြီ။
ဒီ Virus ဒဏ်တော်တော် ခံခဲ့ရဘူးတယ်ဗျ။
ကျွန်တော့်စက် မှာ Kaspersky Internet Security 2009 တင်ထားတယ်ဗျာ။အဲဒီ Virus ပါလာတဲ့ Stick ထိုးပြီးစစ်တော့ No Threads ဆိုပဲ၊ Double Click လဲလုပ်လိုက်ရော Update.exe ဆိုပြီး ဝင်သွားရောဗျာ။
Virus ကိုသတ်ချင်ရင် Kaspersky Internet Security 2009 or 2010 ကိုတင်ပြီး Full Scan ဖတ်ခိုင်းပါ။
သတ်ပေးပါလိမ့်မယ။် ပြီးရင်တော့ Desktop ပေါ်မှာ Funny ဆိုတဲ့ Folder ပေါ်လာလိမ့်မယ်။
Funny ကတော့ဖျက်ရတာခက်ပါတယ်။ Virus သတ်ပြီးရင် အပေါ်က သူငယ်ချင်းတွေပြောတဲ့အတိုင်း Takk Mgr နဲ့ Folder Option တို့ကိုပြန်ခေါ်လို့ရပါတယ်။
ကျနော်က ဒီ post ကို ကိုယ့်ဟာကို ကျိတ်သတ်ပီးမှတွေတာ ခင်ဗျာ.. အားလုံးပြောသလိုပဲ funny ကတော့ no ပါ။ လုံး၀ကိုမပျောက်ပါဘူး ..ကျနော်နည်းကိုတော့ မပြောတော့ပါဘူး အားလုံးမူးနောက်သွားမှာစိုးလို့ပါ...
အခုဒီ post တွေပီဆိုတော့ ကျနော်မပင်းပန်းတော့ဘူးပေါ့ .. စောင့်ပီးတော့မှပဲ သတ်တော့မယ်..
exitplus ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တာ Funny folder ပြောက်သွားပြီ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါ.
deepfreeze or hdguard တင်ထားရင်ကောင်းတယ် ကြိုတင် ကာကွယ်နည်း
ပေါ့ဗျာ ပြီးမှ virus ကို စမ်းသတ်ကြည့်ပေါ့ မရလဲ့ restart ချပေါ့ဗျာ အကောင်းဆုံး
ကျွန်နော် ဆီက စက် 6လုံးကိုရောက်လာသေးတယ်။ funny ဆို တဲ. ဖိုဒါကို ဒက်စတော.ပေါ်မှာ မိန်.မိန်.ကြီးလာဆောက်ထားတာ။ delete လုပ်လို.လုံး၀မရဘူး။ အဲဒါနဲ. ကျွန်တော်လည်း ဒါဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်လိမ်.မယ်ဆိုပြီး Mz ထဲ ၀င်ရှာလိုက်တော. ဒီသရက်ကိုတွေ.တာပါ။ ဒီထဲကနည်းလမ်းတွေ ဆော.၀ဲတွေနဲ. ရှင်းလိုက်တာ ဒီကောင်လစ်သွားပါပြီ။ အဲဒီအတွက် ဒီသရက်ကိုုုုုုုုတင်ခဲ.တဲ.soulkiller19, နည်းလမ်းတွေပေးခဲ.တဲ. ကို exitplus နဲ.ကိုညမီးအိမ်။ဆော.၀ဲယားတွေမျှေ၀ခဲ့တဲ့ ကို sailay အပါအ၀င် ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးပေးတဲ. အကိုတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော.ကို ပညာတစ်ခု တိုးသွားစေလို. funny ဖန်တီးတဲ.သူကို လည်း ကျေးဇူး ပါလို.:P။
၇သွားပြီလား ်funny folder က တော.
ကျွန်တော် computer မှာတော. desktop မှာ right click - properties- desktop- Customize desktop က နေ clean Desktop now လုပ်တာ၇ သွားတယ်
နောက်ပြီးမှ desktop က Unused Desktop Shortcuts ဆိုတာကို delete လုပ် လိုက်တာ၇သွားတယ်
ကျွန်တော် ဒီက အကို တွေ ဆွေးနွေးသွားသလို ကွန်ပျုတာထဲက ကောင်ကိုတော. ရှင်းလိုက်ပြီ။ ဒါပေမယ်. လာသုံးတဲ. ယူဇာ တွေ ရဲ.စတစ်ထဲမှာ အဲဒီကောင် ရှိနေသေးတယ်။ အဲဒါကို ဘယ်လိုသတ်ရမလဲဆို တာ ကျေးဇူးပြု ရ်ု အသေးစိတ်ပြောပြ ပေးလို.ရမလားခင်ဗျာ။ကူညီပါဦးခင်ဗျာ။
ဖန်နီ ပါလာတဲ. စတစ်တွေနဲ. ယူဇာ တွေက ကျွန်တော်တို. ဆိုင်က ကွန်ပျုတာကို လာသုံူးတော. ကွန်ပျုတာထဲမှာ ဖန်နီ ကကျန်ခဲတယ်။ သတ်ပုံသတ်နည်းလေးကူညီကြပါဦးခင်ဗျာ။ကွန်ပျုတာထဲက ဟာကိုတော. သတ်တတ်တယ်။ စတစ်ထဲကဟာကို ပြောတာ:77::77:
ဖိုင်သုံးခုလုံးဒေါင်းလုပ်ဆွဲထားလိုက်ပါပြီခင်ဗျာ။ဘယ်လိုသုံးတာလဲလို.နည်းနည်းလောက်ပြောပြနိုင်မလားခင်ဗျာ။ကိုယ်ဘာသာကိုယ်လည်း စမ်းကြည်.ပါ.မယ်။အကို နည်းနည်း လောက် ပြောပြထားရင် ကလိရတာ ပိုအဆင်ပြေတာပေါ.:p။
ဖိုင် သုံးခုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သုံးခုထဲမှာ USB security နဲ့ USB Auto run virus remover သည်အန်တီဗိုင်းရပ် တွေဖြစ်ပါတယ် USB ထဲက နေ Auto run နဲ့ ချိတ်ပြီးဝင်လာတဲ့ဗိုင်းရပ်တွေကို သတ်နိုင်ပါတယ်...
USB Safely Remove သည် ဗိုင်းရပ် က USB ထဲကနေ run နေတဲ့အခါ Safely Remove hardware လုပ်လို့ မရဖြစ်တတ်ပါတယ် အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာ အဲ့ဒီ process ကို Kill ပြီး ရင် Safely Remove လုပ်လို့ရစေမှာပါ .. အဲ့ဒီအချိန်မှာတပြိုင်နက် USB ထဲမှာ run နေတာ ကိုသုံးထားတဲ့ program လား ဒါမှမဟုတ်ဗိုင်းရပ်လားဆိုတာ သိရပါမယ် ဗိုင်းရပ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ အလွယ်တကူသာ ရှာဖျက်လိုက်ပါတော့.... ဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာကတော့ ပြောစရာမလိုတော့ဘူးထင်တယ်... ပြောတော့ဘူးနော် :D:D
ဟုတ်တယ်ဗျို့ ကျွန်တော် လည်းခံရဘူးတယ် ..tesk mg.ကနေ END Process လုပ်လို့ရဘူး..
အွန်လိုင်းပေါ်တက်ကြည့်တော့.. mcafee က top list တွေ့တယ် mcafee 8.7နဲ့စမ်းကြည့်ပါလားနော့...ကျွန်တော် တုန်းကတော့ ပြတင်းပေါက် အသစ် လဲလိုက်တယ် ..မခံစားနိုင်တော့လို့...mcafee 8.7 နဲ့ ဆိုရင်တော့ မ၀င်တာ သေချာတယ်...၀င်ပြီးမှာ သာ ကျွန်တော် က တင်လို့...virus က ဆရာကြီးဖြစ်နေပြီ:39:...ကောင်းသွားရင် ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာပြောပေးဦးနော်.... HAVE A GOOD TIME...
ကျွန်တော်ဖန်နီ ကိုသတ်တာ 6ကောင်ရှိသွားပါပြီ။
အဓိက ကတော. registery ခေါ်လို.မရတာပါပဲ။ စက်ထဲမှာရှိသမျှ msi.exe နဲ. autorun.inf တွေကိုအကုန်ဖျက်ပြီးပါပြီ။ သူ.ရဲ.ပင်မဖိုင်ကိုဖျက်ဖို. run --regedit ခေါ်လိုက်တိုင်း သူက ပြန်ရောက်လာတယ်။ safemode သုံးရင်သတ်ရင်ရတယ်လို.ကြားဖူးပါတယ်။ safe mode ကဘယ်လိုသုံးရလဲမသိပါဘူး။
safe mode သုံးနည်း ပြောပြပေးပါလား။
ဒါမှမဟုတ်ရင်လညး ဘယ်လိုသတ်ရမယ်လို. အကြံပေးပါလား ခင်ဗျာ။
safe mode တတ်ချင်ရင်တော့ windows မတတ်ခင် F8 ကီးကိုနှိပ်ပါ။ အဲဒီအခါကျရင် safemode တတ်ဖို့ ကျလာပါလိမ့်မယ်။
ခိုး ခိုး ခစ် ခစ် ညှစ်
Funny Virus ဝင်ပြီ ဆိုရင် Desktop ပေါ်မှာ Funny Folder တစ်ခု ပြီးတော့ My Computer ထဲမှာတစ်ခု သွားပေါ်ပါတယ် ။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ဖျက်လို့မရပါဘူး ။ပျက်အောက်ဖျက်လဲ ပြန်ပြန်ပေါ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော့်တုန်းကတော့ Manual သတ်တာအဆင်ပြေသွားပါတယ် ။ ဝင်တာ မကြာသေးတဲ့ စက်ဆို သတ်ရတာလွယ်ပါတယ် ။နဲနဲကြာသွားရင်တော့ သူက Windows ထဲမှာ နေရာအနှံလျှောက် ယူနေတော့တာပါပဲ ။အရင်ဆုံး RRT ဒီ လင့်(ခ)ကနေ ယူလိုက်ပါ ။ပြီးရင် safe mode နဲ့ တတ်ပြီး တော့RRT ကို run ပါ ။ အမှန်ခြစ်မပေးရသေးတာတွေ အကုန် အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ ။ပြီးရင် Task Manager ထဲ ကနေ msi.exe နဲ့ update.exe နဲ့ကို End Process လုပ်ပါ။ Task Manager ခေါ်လို့မရ ရင် ဒီကောင်လေး ကို run ပြီး end လုပ်လိုက်ပါ ။
တစ်ခု က funny virus က run box ကနေ cmd,regedit,msconfig, စတဲ့ ဟာတွေ ကိုခေါ်ရင် end လုပ်ထားတဲ့ msi.exe နဲ့ update.exe က ပြန်run သွားပါလိမ့်မယ် ။ အဲတော့ ကျွန်တော်စောစောကပြောသလို
၁၊ safe mode ကနေ တတ်ပါ။
၂၊ Task Manger (သို့)procexp.exe ကနေ run နေတဲ့ msi.exe နဲ့ update.exe နဲ့ကို End Process လုပ်ပါ။
၃၊ RRT နဲ့ Folder Options ပြန်ခေါ်ပါ။
၄၊ hidden file အပြင် Hide Extensions For Known File Type နဲ့ Hide Protected Operating systems file တွေ ကိုပါ ဖြုတ်ပြစ်လိုက်ပါ ။
၅၊ Funny က c:\_documents and settings\_All user\_application data နဲ့ c:\_documents and settings\_All user\_local setting အောက်တွေမှာ msiexec ဆိုတဲ့ folder နဲ့ autorun.inf file အဖြစ်နေရာ သွားယူပါတယ် ။ ကျန်တဲ့ user တွေ အောက်မှာလဲ အဲလို ပဲနေရာ ယူပါတယ် ။ ဝင်တာ ကြာရင် ဒီ့ထက်များတဲ့ နေရာတွေ မှာတောင်ရှိနေနိုင်ပါတယ် ။အဲကောင်တွေ ကို manual (shift+delete )လိုက်ဖျက်ပြစ်ပါ။ပြီးတော့ c:\_windows\_system32\_DirectX\_kill.exe ကိုလဲ ဖျက်ပြစ်ပါ။ အောက်ကကောင်လေး ကို notepad မှာ .reg နဲ့ save ပြီး တော့လဲ Folder Options ပြန်ဖော်လို့ရပါတယ် ။
ပြီးရင် register ထဲမှာ msi.exe,update.exe နဲ့ msiexec folder တွေကို ရှာပြီးဖျက်ပြစ်ပါ ။
virus မရှိတော့ ဘူးဆိုရင် My Computer ထဲ မှာ ရှိတဲ့ Funny Folder ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။ Desktop ပေါ်က ကောင်ကို တော့ clean desktop wizard သုံးပြီး ဖျက်ပြစ်လိုက်ပါ ။ ပြီးရင် run box ကနေ cmd ရိုက်ပြီး command prompt ခေါ်ကြည့်ပါ ။ရရင် တော့ ဗိုင်းရပ်(စ) မရှိတော့တာသေချာပါပြီ ။ သေချာအောင် task Manger ပြန်ခေါ်ကြည့်ပါ ။ အဆင်ပြေပါစေ ။ Task Manager မရ ရင် RRT ကို သုံးပြီး ပြန်ခေါ်ကြည့်ပေါ့ ဗျာ ။အဆင်ပြေကြပါစေ ။
ဟုတ်တယ်... အဲဒီကောင်ပေါ့ တို့စက်မှာလဲကိုက်နေတယ်။:P
Windows မတက်တော့လို့ Repair ပြန်လုပ်တာလည်း ရဘူး...
အဲဒီ Virus ရေးတဲ့ကောင်တော့လား... မိလို့ကတော့ သားရေပင်တယောက်တပင်စီပစ်ပြီး အသေသတ်ရမယ်။ :39:
kaspersky update ဖြစ်တဲ့စက်မှာ မိပါတယ်။ ၀င်သွားတဲ့စက်အတွက်တော့
တခြားကောင်းတဲ့စက်မှာ slave ချိတ်ပြီး full scan စစ်ပြီးသတ် ပြီး window repair လုပ်
registry တွေကိုတော့ ccleaner နဲ့ရှင်း ဖော်စရာရှိတာများကိုတော့ 3rd party software လေးများနဲ့ပြန်ဖော် မှရမှာပါ။
boot ပြန်မတက်တော့တဲ့စက်အတွက်ကတော့ window ပြန်တင်တာသာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့အကြံပေးပါရစေ။
funny killer လို.ခေါ်တဲ. software လေးပါ။ကျွန်တော်တို.ဆိုင်မှာ funny ထင်တိုင်းသောင်းကျန်းသွားပြီးမှ ဒီဆော.၀ဲယားလေးရတယ်ဗျာ။အခုမှတော.ကျွန်တော်အတွက်မလိုတော.ပါဘူး။လိုတဲ.သူရှိရင်ယူသုံးလို.ရအောင်
တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကလစ်နှစ်ချက်ခေါက်ပြီးစက်ကို restat ချလိုက်ပါ။အဲလောက်ကိုလွယ်ပါတယ်။
System restore points တွေကိုဖျောက်ထားရင် လုပ်လို့ဘယ်ရမလဲ.. ????
အဲဒီ funny virus ၀င်လို့ Destop ပေါ်မှာ Funny Folder လေးပေါ်လာတာနဲ့ Run ထဲမှာ %temp% လို့ရိုက်ပြီး Temp folder ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ပြီးရင် rmv.exe ဆိုတဲ့အရိုးခေါင်းပုံလေးကို Double Click နှိပ်လိုက်ပါ။ ဗိုင်းရပ်ပြန်ရှင်းပေးတဲ့ exe လေးပြန်ထည့်ပေးထားတာပါ။ကြည့်ရတာမွေးနေ့ကိုမှန်အောင်ဖြေနိုင်ရင်ပြန်ရှင်းပေးမယ်နဲ့တူတယ်။ virus ကဥမ္မာစိုးပုံကော၊ So Close ကားကတီးလုံး mp3 file ကော ၊ ပြန်ဖြေတဲ့ File ကောထည့်ပေးထားလို့4MB ကျော်နေတာနဲ့တူတယ်။
System Restore ပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ကတော့ Run-->Gpedit.msc ရိုက်ပြီး Group Policy ကိုဖွင့်ပါ။အဲဒီထဲက Computer Configuration-->Administrative Templates-->System-->System Restore ကို Click နှိပ်ပြီး ညာဘက်က Turn off Configuration မှာ Double Click နှိပ်ပြီး Not Configured-->Apply-->OK လုပ်ပါ။ပြီးတော့ Turn off System Restore မှာ Double Click နှိပ်ပြီး Not Configured-->Apply-->OK လုပ်ပါ။